အမိမြေသို့ကျေးဇူးဆပ်ခြင်း: May 2009
အကိုကြီး ကိုအောင်ဝေးရဲ့ များများရေးပါဆိုတဲ့ အတွက်..ပျားကဗျာ တပုဒ်ရေးရန် စိတ်ကူးကြောင်းပြောတဲ့အခါ..
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 10:57 PM0comments
(၀ဲမှယာ) - ဖာနန်ဒိုဟင်းရစ်ကာဒိုဆို (ဘရာဇီးသမ္မတဟောင်း)၊ ဂျင်မီကာတာ (အမေရိကန်သမ္မတဟောင်း)၊ အလာဘက် (SEWA အဖွဲ့ တည်ထောင်သူ)၊ မေရီရော်ဘင်ဆင် (အိုင်ယာလန်သမ္မတဟောင်းနှင့် UNHCR အကြီးအကဲဟောင်း)၊ တောင်အာဖရိကဘုန်းတော်ကြီး ဒက်စမွန်တူးတူး၊ ဂရိုဘရန့်လန်း (နော်ေ၀၀န်ကြီး ချုပ်ဟောင်း နှင့် ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဟောင်း)၊ လက်ဒါဘရာဟီမီနှင့် ဂရာကာမချယ်
တီးသူမဲ့ စန္ဒယားရဲ့ ချိုသံစဉ်ညှိ..
ထိုင်သူမဲ့ အစည်းအဝေး ထိုင်ခုံနေရာ..
၁၉ နှစ်ဆိုတဲ့ နှစ်အတိုင်းအတာ..
ဘယ်သူနဲ့တူတာ..မသိ
၂၁ ရာစုခေတ် ၏ အကျဉ်းသားလူ..
တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်း အိမ်အမှတ် ၅၄
ဌက်ကလေးလောက်တောင် လေသင်းနံ့ မရှူရှိုက်ရသူ..
ပန်းကလေးတပွင့်လောက်တောင် နေရောင်ဆမ်း မလန်းရသူ
ဒို့ တတွေ ဂုဏ်ယူပါတယ်ကွာ.။
မှောင်မဲ ပျောက်ဆုံးနေခဲ့တဲ့ ကမ္ဘာ..
ငြိမ်းချမ်းစွာနဲ့ ရရမဲ့ လွတ်လပ်ရေး..
သွေးမခင်းဘဲ ရရမဲ့ သာတူညီမျှရေး..
အလာဘက် (SEWA အဖွဲ့ တည်ထောင်သူ)၊
မေရီရော်ဘင်ဆင် (အိုင်ယာလန်သမ္မတဟောင်းနှင့် UNHCR အကြီးအကဲဟောင်း)၊
တောင်အာဖရိက ဘုန်းတော်ကြီး ဒက်စမွန်တူးတူး၊
ဂရိုဘရန့်လန်း (နော်ေ၀၀န်ကြီးချုပ်နှင့် ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဟောင်း)၊
မသဒ္ဓါ ( ၅။၂၆။၂၀၀၉)
လူမျိုးခြားသော်လည်း..သွေးအရောင်တူ..စိတ်အရောင်တူ..ရင်ခုန်သံ တူညီကြသော ငြိမ်းချမ်းလူတစုအတွက်..
မျှော်လင့်ဆဲ..စောင်လင့်ဆဲ…အမေစု လာမဲ့လမ်းဆီ..ရွှေလက်တို့ ဖြင့်ကြိုဆိုပါသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အတွက် လစ်လပ်နေတဲ့ တနေရာ (သို့မဟုတ်) ကမ္ဘာ့ ခေါင်းဆောင်ဟောင်းများနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးနိုဘယ်ဆုရှင်များ တွေ့ဆုံပွဲ
ဓာတ်ပုံ - ရိုက်တာ၊ အေပီ
တောင်အာဖရိကသမ္မတဟောင်း၊ ငြိမ်းချမ်းရေးနိုဘယ်ဆုရှင် နယ်လ်ဆင်မင်ဒဲလား ထူထောင်ထားသည့် “၀ါရင့်ပုဂ္ဂိုလ်များအဖွဲ့” မှ အဖွဲ့ဝင်များ မေလ (၂၆) ရက်နေ့တွင် မော်ရိုကိုနိုင်ငံ၊ မာရာကက်မြို့တော်တွင် တွေ့ဆုံပြီး ငြိမ်းချမ်းရေးနိုဘယ်ဆုရှင်၊ မြန်မာအတိုက်အခံခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို လွှတ်ပေးရေး တောင်းဆို
http://drlunswe.blogspot.com/2009/05/blog-post_3592.html မှ .ကျေးဇူးပါ ဆရာ
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 11:12 PM0comments
သင့်၏ နောက်ဆုံး ရေတစ်ပေါက်။ ရော့ လာသောက်
(၁၀) ဥာဏ်ပညာ ကြီးမားခြင်း အစရှိသော
ဒါနဉ္စ (ဒါန ) ပေးကမ်း လှူဒါန်းခြင်း၏ မင်္ဂလာ
မြန်မာတို့ ၏ အစဉ်အလာ
သုံးဆဲ့ ရှစ်ဖြာ မင်္ဂလာ
စစ်တွေမြို့ က ဆန္ဒပြရဟန်းကိုရေလှူ
ကိုမင်းမင်း ခေါ် ကိုဟန်မင်းသိန်းနှင့် ကိုမောင်စိုးသိန်း
သန်းရွှေ အမျက်နဲ့ နှစ်နှစ်
ရေတိုက်မှူနဲ့ အရှက်တကွဲ အကျိုးနည်း..
တူသော အကျိုးကို ပေးတတ်တာဘဲ..
ဘိုးတော်အရှိန်ကျတဲ့ တစ်နေ့ ..
တစပြင် ကြိုးစင်တင်မဲ့နေ့ 
ယောက်ျားတန်မဲ့ ကြောက်ရွံ့ ငိုယို
မိချောင်းမျက်ရည် ကျမဲ့နေ့
ဒီနေ့လာမှာ..များမကြာ..
မသဒ္ဓါ စေတနာ အလျှောက်တိုက်ပါ့မယ်။
ကြောက်ရွံ့ စွာ..အငမ်းမရ သောက်မလား..
သေမဲ့ ဘေးပြေးတွေ့ ငိုယိုမလား..
မသဒ္ဓါ၏ အလှူ ဒီရေ..
သူ မျိုမှ ကျပါ့မလား..
တူသော အကျိုးကား ပြန်လည်ပေးတတ်ပါသည်။
အေးမြတဲ့ နောက်ဆုံး ရေစင်တစ်စက်..
သူ့ အတွက်တော့ ခါးသက်မဲ့ဒီရေ။
မသဒ္ဓါ (၅။ ၂၅။ ၂၀၀၉)
ရာဇ၀တ်သားပင်ဖြစ်စေကာမူ..မည်မျှပင် မုန်းတီးစေကာမူ ဦးသန်းရွှေ အား နောက်ဆုံးရေတစ်ပေါက်ကို စေတနာသုံးတန်ဖြင့် မသဒ္ဓါ တိုက်ရန် အဆင်သင့်ရှိပါသည်။ ရေစက် အရသာသည်..ချိူသည် ခါးသည်. အေးသည် ပူသည်မှာ ဦးသန်းရွှေ၏ ကံ ကံ၏အကျိုး၌ သာ မူတည်နေသည် ဖြစ်ပါကြောင်း. သိစေအပ်ပါသည်။
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 12:03 PM0comments
ရာဇ၀င်တွင်တဲ့ ကဋ္ဋေတစ်သန်းတန် ခြေလှမ်းများ..
ခြေလှမ်းတို့ကခိုင်မာမြဲ..
သစ္စာတရားတို့ နဲ့အကျဉ်းသည်
တန်ဖိုးမရှိမဲ့ လူအနူံအချာရဲ့ ခြေလှမ်း..
လူမုန်းများ ပြည်သူ့ အမျက်စားတဲ့အခါ
အမှားများ ပြင်မရ ခက်ခဲတဲ့ အခါ.
သံသယအပြည့် သူတဦးလုပ်ကြံမယ်ထင်တဲ့ အခါ
တမျိုးသားလုံး၏ လွတ်လပ်ရေးကိုအလွဲသုံးစား လုပ်ထားတဲ့အခါ
သူ ပိ်ုင်တယ်ထင်တဲ့ စစ်တပ် အရှေ့တောင်
တန်ဖိုးရှိမဲ့ ကဋ္ဋေတစ်သန်းနဲ့ခြေလှမ်း..
အားမာန်များနဲ့လှမ်းတဲ့ အခါ
အမှန်များနဲ့ ရဲရင့်တဲ့ အခါ.
ယုံကြည်မှု အပြည့် တရားဓမ္မရှိတဲ့ အခါ
တမျိုးသားလုံး၏ လွတ်လပ်ရေးကိုကြည့်တဲ့ အခါ..
အတောင် နှစ်ဆယ်ဝတ် ယောက်ျား.
ခန့် ညားသယောင် ဟန်ဆောင်တဲ့ ဓလေ့
ဘယ်သွားသွား သက်တော်စောင့် အပြည့်..
ဘယ်ကိုဘဲဖြစ်ဖြစ်..ရဲရင့် ရင်ဆိုင်မဲ့ မျက်လုံး..
အဘိုး အဘ..မြေးမတို့ ၏ အာဇာနည်မျိုးဆက်..
ပြည်သူတို့ ၏ မြတ်နိုးခံရသူ..
သေသည်တောင်.. ဘ၀ဆက်မဲ့ ဧကရီ..
အမေ့.ခြေလှမ်းများ အနောက်မှာ ပြည်သူရှိပါတယ်.. ရဲရင့်မှုများအတွက် လမ်းပြမှုများအတွက် ကျေးဇူးကဋ္ဋေကဋ္ဋာ ပါ အမေ
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 9:36 AM0comments
အဖေတူသမီးအတွက်.အဖေ့ရဲ့ salute တစ်ချက်
ဖခင်နဲ့ တူသောသမီး ဆိုတာ
သိက္ခာ နဲ့ နေ..
သူ့ အလိုလို ဘယ်မရ
ဘယ်သူမှ ခိုးလို့ မရဖူး။
ဘ၀နဲ့ စတေးမှ နာမည်ကောင်းရတယ်။
နတ်မောက်မြို့ သူကြီး၏ မျိုးရိုး
မချစ်မနှစ်သက်သူနဲ့ဒါးတစ်ချက်
အားနည်းသူဖိနှိပ်ခံ လူသိန်းသန်းတို့ အတွက်..
အဖေ၀ိညာဉ်မဲ့ခန္ဓာက သက်သေ
လေးစားတဲ့ လူတွေ အတွက်
ဘ၀နဲ့ လဲလှယ်ရတဲ့ လွတ်လပ်မှု
ပေးဆပ်ခဲ့တဲ့ ချွေးနဲ့ သွေး
နောင်တ ဘယ်တော့မှ မရနဲ့ သမီး..
သားတို့ ရယ် နားလည်ပေးပါ…
သမီး ဇာတ်နာတာ အားလုံးနားလည်တယ်။
သမီးကို အများချစ်တာ ပြည်သူသိတယ်။
မြင့်သော သစ်ပင် လေတိုက်ခံရတယ်..
ချိုသော အသီး ပိုးထိုးခံရတယ်..
လူကောင်းဆိုတာ လူဆိုး မျက်မုန်းကျိုးခံရတယ်။
လူဆိုတာ တနေ့ သေတယ်.
အမည်ကောင်းကိုသာ ရာဇ၀င်ထဲမှာ ချန်ထားရစ်ခဲ့
ဘာမှ အားမငယ်နဲ့ .သမီး..
အဖေ သမီးအနောက်မှာ အရိပ်လိုရှိတယ်။
အဖေ့သွေးတွေ
ဧရာဝတီ ရေ အလျှဉ်လိုဘဲ
အောင်ဆန်းသွေး မခဲသေးဖူး သမီး။
အာဇာနည်သွေးဟာ ရဲနေဆဲဘဲ သမီး။
လောကဓံဆိုတာကို ရဲရဲသာ ရင်ဆိုင်ခဲ့..
နံရံတွေ မှာ နားရှိတယ်..
သေးငယ်သောလည်း ခိုင်တဲ့ သံကြိုးတချောင်း..
ရဲဝံ့စွာ ပြိုင်ဖက်ကို ရင်ဆိုင်..
အမှန် ဆိုတာ အမြဲနိုင်တယ်..
အလာနှေးပါလည်း အဆုံး သေချာတယ်။
ကဲ ရှေ့ ကို ဆက်ကာ သာလျှောက်…
အဖေ လေးစားစွာ အလေးပြုပါသည်။
တကယ်လို့ များ..အခုနေ..ဖခင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းသာ သမီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အနားမှာ ရှိခဲ့ရင်..ဘာတွေပြောဆို ဘယ်လို အားပေးမလည်း ဆိုတာလေးကို ခံစားကြည့်ပြီး ဤကဗျာကို ရေးကြည့်ပါတယ်.. မှားခဲ့ရင် ခွင့်လွှတ်ပေးပါ။ ကျမရဲ့ ချွတ်ယွင်းချက်။ ကျမရဲ့ ဥာဏ်ရည် မမီတာသာ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ခံစားကြည့်ပါ. ကျမ ရဲ့ လူပြိန်းခံစားမှု လေးတစ်ခုကို။
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 3:42 AM3comments
ဌက်ပျောသီးလေး တစ်လုံး ၏ ပုံပြင်
စိန် ရွှေ ကတ္တီပါ ကော်ဇော..
သမာဓိ သိက္ခာဘဲ မက်မောတယ်။
နိုင်ငံအတွက်ဆို မမောတမ်း လျှောက်မယ်။
ငါ၏ နှလုံး..ငါ၏ လက်ရုံး
ငါ၏ ဝါသနာ ငါ့၏ စေတနာ
ငါ၏ သစ္စာ ငါ၏ မေတ္တာ
ငါ၏ စိတ်ဓါတ် ငါ၏ ပညတ်
ဘာအခက်အခဲ မဆို သွေးမငယ်ဖူး..
ကျုပ်လေ..သခင် တစ်ယောက်မို့ ..
ဖမ်းချင်သပါ့ လာဖမ်းရော့ လဟယ်..
သူမဟာ...ဒို့ ချစ်တဲ့ အောင်ဆန်းသမီး..
အပြစ်မရှိတဲ့ သူကိုကယ်ဖို့ ..
တရားဥပဒေနဲ့အညီ လျှောက်လဲခွင့်ရဖို့့..
မျက်နှာမြင် အားအင်ပေးဖို့ 
နတ်သုဒ္ဒါ တွေ မလိုဖူး
"ကောင်မလေးကို ခု လွှတ်လိုက်.."
မသဒ္ဓါ ( ၅။ ၁၈ ။ ၂၀၀၉)
ဘဘ ဦးဝင်းတင် ရဲ့ စိန်ရွှေနဲ့ မလဲနိူင်တဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာနဲ့ရိုးသားစွာ စားသုံးနေသောဝမ်းစာ ဌက်ပျောသီးလေး တစ်လုံးအတွက် အမှတ်တရ ..
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 9:29 AM0comments
“အောင်ဆန်းစုကြည် ရဲ့ ဒိုင်ယာရီ”
ပြုံးနေသူ့ မျက်လုံး..အချိုဆုံးသူ့ အသံ..
ကျမအသက် (၁) နှစ်
ကျမအသက် (၂) နှစ်..ဘာတွေဖြစ်ပျက်.
ကျမအသက် (ရ) နှစ်..
ကျမအသက် (၁၅) နှစ်..
ကျမအသက် (၁၉) နှစ်
ကျမအသက် (၂၇) နှစ်..
ကျမအသက် (၂၈) နှစ်..
ကျမအသက် (၄၁) နှစ်..
ကျမအသက် (၄၃) နှစ်..
ကျမအသက် (၄၅) နှစ်..
ကျမအသက် (၆၂) နှစ်.
ကျမစိတ်ဓါတ်ကို ဖြတ်ချိုးဖို့ ..ကြိုးစားလည်း
ဒီကဗျာကို မသဒ္ဓါ အမေစုရဲ့ ၂၀၀၇ မွေးနေ့မှာ အိုးဝေစင်္ကာပူ အတွက် ရေးပါတယ်။ ကဗျာဟောင်းတပုဒ်ပါ။ အများခံစားဖို့ ထပ်မံတင်ပေးတာပါ။ http://www.owaysingapore.net/ind_Diary%20of%20DASSK.php
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 10:28 PM 1 comments
ရေးဆွဲ ပေးပို့ သူ Mr Creater အား ကျေးဇူး အထူးတင်ရှိပါသည်။
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 11:00 PM2comments
မိခင်တယောက်၏ သောကနဲ့ မျှော်လင့်ချက်
ကျမ သားကိုမွေးမိတဲ့အချိန် ဘဲလွဲသလား..
၈၀နှောင်းကာလ ရဲ့ ဆယ်ကျော်သက်
ကျမ..သားကလေးမောင်..၈၈၈၈ ရဲ့ မျိုးဆက်
အမေတွေ ရင်ဆို့ ..
သေလား ရှင်မလား ဗျာများတဲ့သူတွေ..
အော်...နှစ် ၂၀ ကျော်ခဲ့ပြီဘဲ..
ဘယ်လောက် ဝေးပစေကွဲ့ 
အမေ ထောင်ဝင်စာလာတွေ့ မဟဲ့..
စစ်အစိုးရ ရဲ့ အာဏာ
ဘယ်လိုပဲ သံခြေချင်း ခတ်ခတ်
အလှည့်နေ့ တွေ ကြုံကြဦးမှာပေါ့
မိခင်များကတော့ သားများအတွက် ဂုဏ်ယူဆဲ
အာဇာနည်ကို မွေးရသည့် မိခင်
( ထောင်ဒဏ် ၆ နှစ်ခွဲချမှတ်ခံရသူ ကိုကြည်ဖြူ၏ မိခင် ပြောကြားချက်အရ)
မသဒ္ဓါ (၅။၁၀။၂၀၀၉ )
အမေ များနေ့ မှာ ထောင်ကျ ကျောင်းသားများ ရဲ့အမေ များအား သားများရဲ့ကိုယ်စား ဂုဏ်ယူ ပါတယ်။ အာဇာနည် အမေတို့ ရဲ့ စေတနာမေတ္တာ ကို မြန်မာတည်သ၍ ကျမတို့ အားလုံး ဂုဏ်ယူနေကြမှာပါ။
မင်းကိုနိုင်။ ကိုကိုကြီး။ ကိုဂျင်မီ။ ကိုမင်းဇေယျာ တို့ ၏ မိခင်များ။ ကိုဇာကနာ့ မိခင် ဒေါ်ကြည်ဦး။ ကိုပြုံးချို ကိုသက်ဝင်းအောင် ၏ မိခင် ဒေါ်မြမြအေး ။ ကိုဌေးကြွယ်၏ မိခင်ကြီး ဒေါ်မိမိလေး။ ကိုပဏ္ဍိတ်ထွန်း၏ မိခင် ဒေါ်ညွန့်ညွန့်ဦး၊ ကိုစည်သူမောင်၏ မိခင် ဒေါ်နုနုဆွေ
ကိုနေဘုန်းလတ်၏မိခင် ဒေါ်အေးသန်း။ ကိုသက်ဇင်၏ မိခင် ဒေါ်တိုးတိုး ။ ဦးဂမ္ဘီရ၏ မယ်တော် ဒေါ်ရေး။ G.Wave အဖွဲ့ မှ ကိုအောင်ဇေဖြိုး၏ မိခင် ဒေါ်ကျင်စန်း။ မြေသြဇာ အဖွဲ့ဝင်ကိုတင်ထွဋ်ပိုင် ၏ မိခင် ဒေါ်ငယ်။ ဇေယျာသော်၏ မိခင် ။ မောင်ရဲမြတ်ဟိန်း၏မိခင် ၊ ကိုကြည်ဖြူ၏ မိခင် (အမည်မသိတာခွင့်လွှတ်ပါ) စတဲ့ အာဇာနည်မိခင်များသို့အမှတ်တရ မှတ်တမ်းတင်ပါသည်။
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 11:48 AM0comments
အမှန်တရား..လေးစား..တရားခံဖြစ်သွားတဲ့ ရှေ့ နေများ..
တရား ဥပဒေ ဆိုတာ..
ကျောသား ရင်သား မျှမျှတတ
လျှောက်တင်ပြသရမဲ့ အရှေ့ ကနေ..
သိက္ခာ သမာဓိ လေးစားတဲ့
ကျွန်တော်တို့ ဘ၀ ရှေ့ နေ
ဒါးပြ။ မုဒိမ်း သူခိုး
ပြည်သူ့ ဘဏ္ဍာ အလွဲသုံးစားသမား.
အိမ်ယာမြေမှု၊ ကွဲကွာ ထိမ်းမြားမှု။
ကျုပ်တို့ ရှေ့ နေတော့ အကျိုးဆောင်ပါတယ်။
ခု ကျနော်တို့ လိုက်တာက နိူင်ငံရေးဆန္ဒပြမှု
အင်တာနက်စာပို့ မှု။ ခိုဌက် ငါးတွေ လွတ်တဲ့အမှု
ကားခချွေတာ လမ်းလျှောက်..လမ်းပိတ်ဆို့ စေမှု
အဓမ္မ အလုပ်သမား နစ်နာကြေးရလိုမှု
သွေးစွန်းဆွမ်းအကပ်မခံ ဘုန်းကြီးရဲ့ အာဏာဖီဆန်မှု
AIDS ရောဂါသည်များ ပြုစုယုယမှု
နာဂစ် အလောင်းပုပ် မြေမြှုပ်ပေးမှု
နာရေးဒုက္ခသည် ကူညီ ဆွမ်းသွပ်ပေးမှု
ဒီလို ဆွဲစေ့တဲ့ နိုင်ငံရေးမှုတွေ..
လိုက်ရတဲ့ ရှေ့ နေ..
ထောင်ကျရေး မကျရေးလည်း မသဲကွဲ
ရှေ့ နေတောင် ဆွဲမှတော့ဗျာ
မျှတတဲ့ တရားစီရင်ရေး ..
မိုးနဲ့မြေပြင်လောက်ကလေးပါ။
ရှေ့ နေ ကိုယ်တိုင်တောင်
ပြည်မြန်မာ မှာတရားဥပဒေ အငွေ့ ပျံနေခဲ့ပြီ
နအဖ ရေးတဲ့..အာဏာရှင် အကြိုက်
ရှေ့ နေတောင် မျက်စေ့ မမှီလိုက်
ဆွဲသုံးတဲ့ ဥပဒေ…အမြင်ကပ်သူဆွဲ ဥပဒေ
ရှေ့ နေ ထောင်ကြောက်ရမလား။
ထောင်ထဲဝင်ဖို့ပြင်ဆင်ထားတယ်.
တရားခံဖြစ်သွားတဲ့ ရှေ့ နေ
ကိုဖိုးဖြူ နဲ့ ကိုစောကျော်ကျော်မင်း
လိုင်စင်ပြုတ်ရှေ့ နေ ကိုညီညီထွေး၊
အသက်တောင် စွန့် ရဲတယ်။
လာဘ် အကျိုးကို မဆောင်ဖူး..
အာဏာရှင်ကို ဖား..အမြီး မထောင်ချင်ဖူး
ဂုဏ်သိက္ခာ..ကျန်နေခဲ့တဲ့ ဒို့ ရှေ့ နေ
ရှေ့နေ ဦးအောင်သိန်း နဲ့ ဦးခင်မောင်ရှိန် ပြန်လွတ်
ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအတွက် ဥပဒေအကျိုးဆောင်ပေးနေရင်း ဖမ်းဆီးခံရတဲ့ ရှေ့နေကြီး ၂ ဦး ဒီကနေ့မှာ ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာခဲ့ပါပြီ။ ရန်ကုန်မြို့က ၀ါရင့် ရှေ့နေကြီး ၂ ဦးဖြစ်တဲ့ ဦးအောင်သိန်း နဲ့ ဦးခင်မောင်ရှိန် တို့ဟာ ထောင်ဒဏ် (၄) လစီ အသီးသီး ပြစ်ဒဏ်ကျခံနေရာက ဒီကနေ့ ပြည့်မြောက်ခဲ့တဲ့ အတွက် သူတို့ကို ဖမ်းဆီးထားတဲ့ နယ်ထောင်တွေက ပြန်လည် လွတ်မြောက်လာခဲ့တာပါ။ ဒီအထဲက ရှေ့နေကြီး တဦးဖြစ်တဲ့ ဦးအောင်သိန်း နဲ့ ဆက်သွယ် မေးမြန်းထားတဲ့ ကိုအောင်လွင်ဦး က တင်ပြထားပါတယ်။
“လျှောက်လဲချက်ပေးတော့လည်း ထောင်ကျမယ်ဆိုတာ စိတ်ထဲမှာ သံသယ ရှိတော့ ကိုယ့်ဘာသာ ဆေးနဲ့ အင်္ကျီ အ၀တ်အစားတွေ အကုန်လုံး အဆင်သင့်လုပ်ထားတာပေါ့နော်။ တရားစီရင်မှုက ငါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ တရားစီရင်မှုဟာ very speedy ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင် ငါ့ကို ထောင်ချဖို့အတွက် အစီအစဉ်တော့ ရှိနေပြီဆိုတာ တွက်ထားတာပေါ့နော်။ အဲဒီအတွက်လည်း ထောင်ကျသွားလို့လည်း ကျနော့်အတွက်လည်း ဘာမှ အထွေအထူး အံ့သြမှု မရှိပါဘူး။ အယ် - နောက်တခုက ထောင်ကထွက်လာတော့လည်း ကျနော့် ရက်ပြည့် လပြည့် နေ့ပြည့် ထွက်တဲ့သူတွေလိုလည်း ဘာမှ ၀မ်းသာစရာ အကြောင်းတရားမရှိပါဘူး။ ဒါ သမားရိုးကျ ပါ။ ဒီလိုပဲခံစားပါတယ်။”
နောက်တခုက တခြားထောင်တွေမှာ ဒီလိုပဲ ရောက်သွားတဲ့ နိုင်ငံရေးကိစ္စတွေနဲ့ ဆက်စပ်ဖမ်းဆီးခံရတဲ့လူတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ ကျနော်တို့ ကြားရတာတွေ ရှိပါ တယ်။ ထောင်တွင်းတွေမှာ ဖိနှိပ်မှုတွေ ရှိတယ်။ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု တွေ မကောင်းဘူး။ စသဖြင့် သတင်းတွေ ကြားတယ်ဆိုတော့ အန်ကယ့် အတွေ့အကြုံတွေကရော ထောင်ထဲမှာ ဘယ်လို ကြုံခဲ့ရလဲ ခင်ဗျ။ -
နောက်တခုကလည်း အန်ကယ်ကတော့ ပြန်လွတ်လာတယ်။ ဒါပေမယ့် အစောပိုင်း ဒီလိုပဲထောင်ကျခံလိုက်ရတဲ့ ရှေ့နေတွေလည်း အပါအ၀င်ပေါ့နော်။ နိုင်ငံရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေက ထောင်နဲ့ချီပြီးတော့ မြန်မာနိုင်ငံက အကျဉ်းထောင်တွေထဲမှာ ရှိနေသေးတယ် ဆိုတော့ ဒီအပေါ်မှာရော အန်ကယ် ခံစားချက် ဘယ်လိုရှိလဲခင်ဗျ။ -
နောက်တခုက အန်ကယ် ပြန်လွတ်လာပြီဆိုတော့ ဒီဥပဒေရေးရာ အလုပ်တွေ နိုင်ငံရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေရဲ့ အမှုတွေကို လိုက်လက်စတွေလည်း ရှိတယ်ဆိုတော့ ဆက်လိုက်ဖို့ရော ရှိလားခင်ဗျ။ -
ကိုညီညီထွေး ၏ အင်တာဗျူး
မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများ လွတ်မြောက်ရေး ဝတ်ပြုဆုတောင်းသူ ကြည့်မြင် တိုင်မြို့နယ် အန်အယ်လ်ဒီအဖွဲ့ဝင် ကိုရန်နိုင်ထွန်း အပါအဝင် ၃ ဦးအတွက် တရားခွင်တွင် ခုခံကာကွယ်ပေးရာမှ မြောက်ပိုင်းခရိုင် တရား ရုံး က ရုံးတော် မထီမဲ့မြင်မှုဖြင့် ပြစ်ဒဏ်ချခဲ့သည်။
သူ၏ ထောင်တွင်း အတွေ့အကြုံနှင့် ခံစားချက်၊ အတွေးအမြင်တချို့ကို သိရှိနိုင်ရန် မဇ္ဈိမသတင်းထောက် ဖနိဒါက ဆက်သွယ် မေးမြန်းထားသည်များကို တင်ပြလိုက်ပါသည်။
တရားခွင်ပေါ်မှာ ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ အကြောင်းအရာ အမှန်မဟုတ်ဘူးခင်ဗျာ။ တချို့ အစိတ်အပိုင်းတွေ မှန်သော်လည်း တချို့ အစိတ်အပိုင်း မှာ မမှန်ဘူး။ ဒါပေမဲ့ ဒီတရားခွင်မှာ ပေါ်နေတဲ့ မှတ်တမ်းတွေအရ ကျနော်တို့ကို တိုင်တာ စတင်မှတ်တမ်းတင် ကတည်းကိုက မမှန်ဘူး။ ကျနော်တို့ တာဝန်မယူဘူးလို့ မပြောဘူး။ ဒါပေမဲ့ တာဝန်မယူပါဘူးလို့ ပြောတယ်ဆိုပြီး မှတ်တမ်းနဲ့ အမှုစွဲခဲ့ပါတယ်။
ကျနော့်အမှုက အာမခံ ရတဲ့ အမှုပဲ။ အဲဒါကို ကျနော် အာမခံ လျှောက်ဖို့ မပြောလိုက်ရဘူး။ ကျနော် အပြင်ထွက်မယ် လုပ်တော့ ကျနော့် ကို ရဲက ဖမ်းဆီးသွားတယ်ဗျာ။ ကျနော် လျှောက်ထားခွင့် ရှိတယ်။ အဲဒီ အခွင့်အရေး ရှိတယ်။ မရခဲ့ပါဘူး။
စားတာကတော့ ကျနော်တို့ နိုင်ငံရေးအမှုနဲ့ အကျဉ်းသားတွေကိုတော့ ဆန်ကြမ်းထမင်း ကျွေးပါတယ်။ ပဲဟင်း ပေးပါတယ်။ ဆား မပါ ဘူး။ အချိုမှုန့် မပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ တပတ်တကြိမ် ဆား ပေးပါတယ်။ တာလပေါ ခေါ်တဲ့ ဟင်းရွက်နဲ့ ချက်ထားတဲ့ ဟင်း ပေးပါတယ်။ တရက်ကို ထမင်းက မနက်တကြိမ်၊ ညတကြိမ် ကျွေးပါတယ်။ ဟင်းကတော့ တရက်ကို တကြိမ်ပဲ ကျွေးပါတယ်။ အသားဟင်းက တပတ်ကို နှစ်ကြိမ် ပေးတယ်။ အမဲသားစားသူ အမဲသား ကျွေးတယ်။ အမဲသား မစားသူကို ကြက်ဥ ကျွေးပါတယ်။
ကျနော်က စက်တင်ဘာ အရေးအခင်း မတိုင်ခင် ကတည်းကနေ သာမန်အမှုတွေ လိုက်ပါ ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီ နောက်ပိုင်းမှာ ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ နိုင်ငံရေးအမှုတွေ ရှိလာတဲ့ အချိန်ကျတော့ နိုင်ငံရေးအမှုတွေ၊ အကြမ်းဖက်မှုတွေ ကျနော် လိုက်ခဲ့ပါတယ်။ အရပ်ဘက် အမှုတွေ လိုက်ပါနေတဲ့အခါမှာ မြင်တွေ့လာတဲ့ နိုင်ငံရေးအမှုမှာ ရှေ့နေ တော်တော်များများက မလိုက်ကြပါဘူး။ ဘယ်လိုသဘောနဲ့ မလိုက်ကြဘူး ဆိုတာကိုတော့ ကျနော် မပြောလိုပါဘူး။ အဲဒီမှာ ရှေ့နေ ရှေ့ရပ်တွေရဲ့ ရသင့်ရထိုက်တဲ့ ခုခံချေပခွင့်တွေ ဆုံးရှုံးနေတာကို တွေ့ရတဲ့အတွက် ကျနော် လိုက်ပါဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။
ကျနော် ရှေ့ဆက်လုပ်ဖို့ လိုင်စင် သိမ်းလိုက်ပါပြီ။ သိမ်းတာက ၂ဝဝ၈ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာ ၁၇ ရက်နေ့ ကျနော် ထောင်ထဲ ရောက်နေတုန်း ကျနော့်အိမ်ကို စာပို့လိုက်တယ်။ ဘယ်လိုစာလဲဆိုတော့ ကျနော်ဟာ ပြစ်မှုကျင့်ထုံး ဥပဒေ ပုဒ်မ ၂၂၈ အရ အလုပ်ဖြင့် ထောင်ဒဏ် ၆ လ ချမှတ်ခြင်း ခံရပြီးတော့ အဲဒီအမိန့်ဟာ ယနေ့တိုင် အတည်ဖြစ်တယ် ဆိုပြီးတော့ ဖော်ပြထားတာ တွေ့တယ်။ ကျနော် ရှေ့နေ ဦးညီညီထွေး ကို ရှေ့နေလိုက်ခွင့် မရသည့် ဥပဒေ ပုဒ်မ ၁၃ (စ) အရ ဒီထုတ်ပြန်သည့်နေ့မှ စ၍ ရှေ့နေ လိုက်ပါဆောင်ရွက်ခွင့် ရပ်ဆိုင်းလိုက်သည် ဆိုပြီး အမိန့်ထုတ်လိုက်ပါတယ်။
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 2:14 AM0comments
၁၄ နှစ်သမီး ကျမ..
သူတောင်းစား ကဋေကဋာနဲ့ 
သာမန် လယ်သူမလေးတောင် မဖြစ်..
တစ်နေ့တစ်နေ့ 
နှစ်ပါးသွားရတဲ့ ကျုပ် လေ..
အဘရယ် မဆူပါနဲ့ တော်..
ရှင်သူများက ငရဲမီးထဲက ၀ဋ်တွေ..
အပိုင်းပိုင်း အစစ ဘ၀တွေ..ကျိ်ုးခဲ့ပြီ..
မြစ်ဝကျွန်းပေါ်မှာ ပြည့်တန်ဆာ ပိုများလာ
Monday, 16 March 2009 18:40 အောင်သက်ဝိုင်း .
နာဂစ်မုန်ုတိုင်းဒဏ် အဆိုးရွားဆုံး ခံခဲ့ရသော လပွတ္တာ မြို့နယ်တွင် ယခုအခါ ပြည့်တန်ဆာ လုပ်ငန်းများ ကြီးထွားလာပြီး ဒေသခံများ သာမက မြောင်းမြနှင့် ပုသိမ်မှ ပြည့်တန်ဆာ များပါ လပွတ္တာသို့ ရွှေ့ပြောင်း လုပ်ကိုင် လာကြ ကြောင်း ဒေသခံများထံမှ သိရသည်။
နာဂစ်မုန်တိုင်း မဖြစ်ပွားခင်ကပင်၊ ပင်လယ်ဆိပ်ကမ်းမြို့ဖြစ်သည့် လပွတ္တာမြို့တွင် ပြည့်တန်ဆာလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သူတို့ များပြားခဲ့ပြီး နာဂစ်မုန်တိုင်း ဖြစ်ပွားပြီး နောက်ပိုင်းတွင် ပြည့်တန်ဆာအဖြစ် အသက်မွေး ၀မ်းကြောင်း လုပ်ကိုင်သည့် အမျိုးသမီး အရေအတွက် ပိုများလာပြီး လိင်ဖျော်ဖြေရေး လုပ်ငန်းများ ပိုမို တွေ့လာရကြောင်း လပွတ္တာမြို့နယ်တွင် ဆိုင်ကယ်တက္ကစီ မောင်းနှင်သူများက ပြောသည်။
“လပွတ္တာမှာ အရင်က မိသားစုတည်းခိုခန်းတို့၊ မြနန်းသစ္စာ တည်းခိုခန်းတို့၊ ဧရာစတား တည်းခိုခန်းတွေနဲ့ တခြား တည်းခိုခန်းတွေမှာ ပြည့်တန်ဆာ လုပ်ငန်းတွေနဲ့ ပြည့်နေခဲ့တာ။ အခု ဒီ တည်းခိုခန်းတွေကို ကုလသမဂ္ဂနဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေက ငှားထားတော့ ပြည့်တန် ဆာလုပ်ငန်းတော့ မလုပ်ကြဘူး။ ဒါပေမယ့် လူအ၀င်အထွက် များတော့ ပြည့်တန်ဆာလုပ်ငန်း ပိုများလာတယ်” ဟု စွမ်းအားရှင် တဦးဖြစ် သူ ရန်ကုန် - လပွတ္တာ ကားဂိတ်အနီးရှိ ဆိုင်ကယ်တက္ကစီဂိတ်မှ ဆိုင်ကယ် ကယ်ရီသမားတဦးက ပြောပြသည်။
ဆိုင်ကယ်တက္ကစီ ပြေးဆွဲသူများနှင့် ဆိုက်ကားသမားတချို့မှာ ပြည့်တန်ဆာခေါင်းများနှင့် ဆက်သွယ်ပြီး ပျော်ပါးလိုသူများ ရှာဖွေပေး ခြင်း ကို အလုပ်တခုသဖွယ် လုပ်ကိုင်လာ သကဲ့သို့ ပြည့်တန်ဆာများကို သယ်ယူပို့ဆောင် ပေးခြင်းများ လုပ်ကိုင်လာကြကြောင်း လပွတ္တာမြို့ခံများထံမှ စုံစမ်းသိရှိရသည်။
“မြောင်းမြက ပြည့်တန်ဆာတွေ၊ ပုသိမ်က ပြည့်တန်ဆာတွေလည်း လပွတ္တာကို ဆင်းလာကြတယ်” ဟု လပွတ္တာမြို့ခံ ကဏန်းလုပ် ငန်းရှင်တဦးက ပြောသည်။
ပြည့်တန်ဆာလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သူအများစုသည် လပွတ္တာမြို့နယ်ရဲများကို လိုင်းကြေးပေးကြရပြီး လပွတ္တာမြို့ပေါ် ၁ ရပ်ကွက် စည်ပင် သာယာ ဘုန်းကြီး ကျောင်းအနီး၊ ရေကန်ကြီးဘေးရှိ ထန်းပင်စုဟု ခေါ်ဆိုသည့် နေရာတွင် ပြည့်တန်ဆာတန်း တခုသဖွယ် ဖြစ်ထွန်း နေကြောင်း လပွတ္တာ ဒေသခံများ၏ အဆိုအရ သိရသည်။
“၁ ရပ်ကွက် ရေကန်ဘေးက တဲတွေမှာ ပြည့်တန်ဆာလုပ်ကြတဲ့ အမျိုးသမီးတွေ များတယ်။ ကန်ဘောင်ဘေးမှာ အဲဒီ တဲလေးတွေမှာပဲ ပြည့်တန်ဆာ အမျိုးသမီးတွေနဲ့ ပျော်ပါးလို့ရတယ်” ဟု အသက် ၄၅ နှစ်အရွယ် လပွတ္တာမြိုခံ ဆိုင်ကယ်ကယ်ရီသမား တဦးက ပြောသည်။
လပွတ္တာမြို့ပေါ်တွင် ပြည့်တန်ဆာများနှင့် ပျော်ပါးသည့် ဈေးနှုန်းမှာလည်း မြင့်တက်လျက်ရှိပြီး ယခင်က တကြိမ်ပျော်ပါးလျှင် ငွေ ၂၀၀၀ ကျပ်၊ တညတာ ပျော်ပါးလျှင် ၈၀၀၀ ကျပ်သာရှိခဲ့ သော်လည်း ယခုအခါ တကြိမ် ပျော်ပါးလျှင် ငွေ ၃၅၀၀ ကျပ်၊ တညတာပျော်ပါးလျှင် ငွေ ၂၀၀၀၀ ကျပ် ပေါက်ဈေး ရှိလာကြောင်း သိရှိရသည်။
“မြောင်းမြနဲ့ ပုသိမ်က ပြည့်တန်ဆာတွေဆိုရင် တည်းခိုခန်းမှာတည်းပြီး ဖောက်သည် ရှာကြတယ်။ လပွတ္တာမှာ ရတဲ့ကြေးက မြောင်းမြနဲ့ ပုသိမ်မှာရတဲ့ ကြေးထက် အများကြီးမြင့်လို့” ဟု လပွတ္တာ ၉ ရပ်ကွက်နေ လူငယ် တဦးက ပြောသည်။
ပြည့်တန်ဆာများနှင့် ပျော်ပါးကြသူများတွင် နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းများ၌ အလုပ် လုပ်ကြသည့် အမျိုးသား များလည်း ပါဝင်ပြီး ရေ လုပ်သားများ၊ အလုပ်ကြမ်း အလုပ်သမားများ အပါအ၀င် လူတန်းစားအသီးသီး ပါဝင်ကြောင်း ဒေသခံများ၏အပြောအရ သိရသည်။
“နာဂစ်မှာ အမျိုးသမီးနဲ့ ကလေးတွေ အများဆုံးသေတယ်။ ရွာတွေမှာ မိန်းမသေသွားတဲ့ ယောက်ျားက တော်တော်များတယ်။ အဖွဲ့ အစည်းတွေမှာ လုပ်ကြတဲ့ အမျိုးသားတွေလည်း တော်တော် များများ ရှိနေတာ ကြောင့် လပွတ္တာရဲ့ ပြည့်တန်ဆာလုပ်ငန်းက ကြီးထွား လာတာ” ဟု လပွတ္တာမြို့ခံ စီးပွားရေးသမား တဦးက ရှင်းပြသည်။
ယခုလက်ရှိ အခြေအနေတွင် လပွတ္တာမြို့တွင် ပြည့်တန်ဆာ လုပ်ငန်း ကြီးထွားလာမှုနှင့် အတူ ခုခံအားကျဆင်းမှု ရောဂါ ကူးစက်နိုင်မှု အခြေအနေ မှာလည်း စိုးရိမ်စရာ ကောင်းလောက်သော အခြေအနေတွင် ရှိကြောင်း ခုခံအား ကျဆင်းမှုရောဂါ ပညာပေးရေး အဓိက လုပ်ဆောင်နေသော လပွတ္တာမြို့နယ်အခြေစိုက် ဆွစ်ဇာလန် AFXB အဖွဲ့မှ အမည်မဖော်လိုသူ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်း တဦးက ပြောသည်။
“လပွတ္တာမြို့နယ်မှာ လာနေကြတဲ့ သူတွေကလည်း ရပ်ဝေးက၊ ပြည့်တန်ဆာတွေကလည်း ရပ်ဝေးရပ်နီး အကုန်ပဲ။ သူတို့နဲ့ ပျော်ပါးကြတဲ့ သူတွေက လပွတ္တာမှာတင် နေကြတာမဟုတ်ဘူး၊ သူတို့ရဲ့ နေရပ်ရင်း ဒေသတွေဆီ ပြန်သွားကြတာဆိုတော့ လပွတ္တာက ခုခံအား ကျဆင်းမှုရောဂါ ဖြန့်ဖြူးတဲ့ ဆုံရပ်ကြီးတခုလို ဖြစ်လာတယ်။ ဒါ အင်မတန်မှ စိုးရိမ်စရာကောင်းတဲ့ အချက်ပဲ” ဟု AFXB ၀န်ထမ်း ကသုံးသပ်ပြောပြသည်။
ပြည့်တန်ဆာ လုပ်ကိုင်ကြသည့် အမျိုးသမီးများတွင် ဆယ်ကျော်သက်အရွယ် အမျိုးသမီးများ ပါဝင်လာပြီး တချို့မှာ နာဂစ်မုန်တိုင်း ကြောင့် မိဘဆွေမျိုးသားချင်း သေဆုံးသွားကြသည့် အမျိုသမီးငယ်များ ဖြစ်ကြောင်း လည်း စုံစမ်းသိရှိရသည်။
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 10:30 PM0comments